အရေပြားခြောက်သွေ့စေသည့်ဆေး ၄ မျိုး (နှင့်မည်သို့ကာကွယ်နိုင်သည်) - ကျန်းမာရေးပညာရေး | ဇန္နဝါရီလ 2022
သတင်း၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ပြင်းထန်သောအားကစား ဖျော်ဖြေရေး ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ရပ်ရွာ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> သင့်အရေပြားကိုဆေးဝါးများခန်းခြောက်စေသည့်အခါဘာလုပ်ရမည်နည်း
dry ခြောက်သွေ့သောယားယံသောဆောင်းရာသီအရေပြားအတွက်ရာသီချိန်ဖြစ်သည်။ လေထုအတွင်းရှိအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူစေသောခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုကြောင့်လည်းဖြစ်ပေါ်စေသည် သင့်အရေပြားရှိရေသည်အငွေ့ပြန်စေသည် ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ။ အချို့ဆေးဝါးများသောက်သုံးသူများအတွက်အရေပြားပြproblemsနာများပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်။
ရေရှည်သောက်သည့်အခါသွေးဖိအားဆေးများ၊ ကိုလက်စထရောဆေးများ၊ ဝက်ခြံကုသမှုများ၊ အရေးအကြောင်းများလိမ်းဆေးနှင့် anti -istamines များအားလုံးသည်အရေပြားခြောက်သွေ့စေသည့်ဆေးများဖြစ်သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုလူနာများ ဤဆေးဝါးများကိုသောက်သုံးသူတို့သည်အရေပြားပြcomplနာများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသည်၊ ၎င်းတို့သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်ဆေးမျိုးစုံသုံးနိုင်သည်။ ထိုသွေးပေါင်ချိန်ပမာဏကိုကိုလက်စထရောဆေးနှင့်အတူထည့်ပါ။
ဒါကြောင့်သင်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးများကသင့်ကိုခြောက်သွေ့သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်အသားအရေကိုနူးညံ့ပြီးနူးညံ့စေသလဲ။ ကျနော်တို့ထွက်ရှာတွေ့မှအချို့သောကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူ check လုပ်ထား။
Diuretics ဆေးဟာမင်းရဲ့အသားအရေကိုခြောက်သွေ့စေတယ်လို့ Robin Evans ကဆိုပါတယ် Stamford, Connecticut ရှိအရေပြားအထူးကု ။ ဤဆေးများသည်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း၊ နှလုံးအခြေအနေနှင့်အသည်းနှင့်အခြားအရည်များကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းစုဆောင်းရန်အသုံးပြုသည်။
Diuretics ဆေးသည်သင်၏ခန်ဓာကိုယ်အားဆားနှင့်ရေကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒီဆေးတွေကမင်းတို့ကျောက်ကပ်ထဲမှဆိုဒီယမ်ဓာတ်ပိုမိုများစေဖို့ကျောက်ကပ်ကိုကူညီပေးတယ်။ ဆိုဒီယမ်သည်သင်၏သွေးများမှရေကိုထုတ်ယူပေးသောကြောင့်သင်၏သွေးကြောများမှစီးဆင်းသောအရည်ပမာဏကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုကျဆင်းစေသော်လည်းသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ရေမလုံလောက်ပါကအရေပြားခြောက်သွေ့စေသည်။
လူကြိုက်များသောမြင့်မားသောလက်စထရောဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သော statin သည်အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းအပါအ ၀ င်အသားအရေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည် Nonye Uddoh , Pharm.D ။ တစ်Silver Spring, Maryland ရှိဆေးဆိုင်။
Statins သည်သင်၏အရေပြားကိုပိုမိုစိုပြေစေပြီးရေများများစီးဆင်းစေပြီးသင့်အရေပြားကိုခြောက်သွေ့စေသည်။ တချို့ထဲမှာ ပြင်းထန်သောရောဂါဖြစ်ပွားမှု , statins အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်နှင်းခူကိုတုပကြောင်း flaky အရေပြားဖြစ်ပေါ်စေလူသိများခဲ့ကြသည်။ statins အချို့ဥပမာပါဝင်သည် Lipitor ( atorvastatin ), Zocor ( simvastatin ), Lescol ( fluvastatin ), Pravachol ( ကဗျာ ), နှင့် မင် ( rosuvastatin ) နှင့် Mevacor သို့မဟုတ် Altocor ( lovastatin ) ။
အရေပြားခြောက်သွေ့စေနိုင်သည့်အခြားဆေးဝါးများတွင် antististines များပါ ၀ င်သည် Benadryl ဒေါက်တာ Uddoh ကပြောပါတယ်။ သင့်အရေပြားတွင် histamine receptors များရှိပြီး၎င်းကိုဆီထုတ်လုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ Antististines များသည်အရေပြား၏ဆီထုတ်လုပ်မှုကိုနှေးကွေးစေပြီး၎င်းကိုခြောက်သွေ့စေသည်။ ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းကအခြောက်လှန်း။ ယားယံနိုင်သည်။
ဒေါက်တာအီဗန်ကရှင်းပြသည် Accutane နှင့် Retin-A နှစ် ဦး စလုံးဝက်ခြံကိုကုသရန်အသုံးပြုကြသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ Accutane သည်ဆေးတောင့်တစ်မျိုးထဲမှလာပြီးနှုတ်ဖြင့်သောက်သည်။ အခြားကုသမှုများကိုမတုံ့ပြန်သောပြင်းထန်သည့်ဝက်ခြံများအတွက်မကြာခဏသတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည်အရေပြားတွင်ဆီထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့ကျစေသည်၊ ၎င်းသည်တစ်ကိုယ်လုံးခြောက်သွေ့စေသည်။
Dr. D Evans ကနှုတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းသည် Accutane တွင်တွေ့ရသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ လူနာ ၁၀၀% တွင်မပါရှိသော်လည်းအခြားအရေပြားမျက်နှာပြင်နှင့်အခြားအချွဲအမြှေးပါးများခြောက်သွေ့ခြင်းကိုမကြာခဏတွေ့မြင်နိုင်သည်။
Retin-A (Retin-A ဆိုတာဘာလဲ?) သည်အခြားအရေပြားဆဲလ်ဆဲလ်ဟောင်းများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအသစ်များအားလျှင်မြန်စွာဖွဲ့စည်းရန်လိမ်းပေးသောလိမ်းဆေးဖြစ်သည်။ ခြောက်သွေ့သောအရေပြားအစက်အပြောက်များနှင့်အရေပြားအခွံများသည်ဤဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်သည်။ ဒေါက်တာအီဗန်က၎င်းကိုဝက်ခြံရောဂါကိုအဓိကကုသရန်အသုံးပြုသော်လည်းကောင်းမွန်သောလိုင်းများနှင့်အရေးအကြောင်းများကိုကုသခြင်းအပါအ ၀ င်အလှကုန်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်ဟုလည်းပြောခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အက်ကင်နစ် keratoses ဟုခေါ်သောအရေပြားအကြိုကင်ဆာများကိုလည်းကုသနိုင်သည်။
ဤအရေပြားအမျိုးအစားအတွက်သင့်တော်မှုရှိစေရန်ဤဆေးညွှန်း၏လိမ်းဆေး၏ဒီဇိုင်းနှင့်အားကိုသင်၏အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကရွေးချယ်ရမည်ဟုဒေါက်တာအီဗန်စ်ကပြောကြားသည်။ သင်၏အသားအရေသည်အလွန်ထိခိုက်လွယ်ပြီး rosacea ကျရောက်လျှင်၎င်းကိုသည်းမခံနိုင်ပါ။
Hydrate, Hydrate, Hydrate! ဒေါက်တာအီဗန်ကပြောပါတယ်။ ရေများများစားစားသောက်ပါ၊ ကဖိန်းဓာတ်ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ လူနာများသည် flaxseed ဆီဆေးပြားများကိုယူပြီးအိုမီဂါ -၃ ဖက်တီးအက်စစ်များများစားစားရှိသည့်အစာအာဟာရဓာတ်များဖြင့်အရေပြားခြောက်သွေ့မှုအတွက်စားရန်အကြံပြုသည်။
ဒေါက်တာ Uddoh ကဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အရေးကြီးကြောင်းသဘောတူသည်။ လူနာများသည်ဆီးသွားပြီးသည်အထိရေကိုပိုမိုစားသုံးသင့်သည်။
ဒါကြောင့်ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေအတွက်အကောင်းဆုံး moisturizer ကဘာလဲ။ သောက်သုံးသောပုံစံသည်ပြောင်းလဲလေ့ရှိသည်။ Dr. Uddoh က Eucerin သို့မဟုတ် Aquaphor moisturizing lotion ကိုအရေပြားခြောက်သွေ့စေရန်အတွက်အကြံပြုသည်။ ၎င်းကိုအစိုဓာတ်ထိန်းခွာရန်ရေချိုးပြီးနောက်ရေစိုပြီးနောက်အရေပြားတွင်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသည်။ လိမ်းဆေးသည်နေ့ခင်းဘက်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်လျှောက်ထားပြီးနောက်မနှစ်မြို့ဖွယ်၊ ချောကျိကျိရုပ်ရှင်ကိုစွန့်ခွာလေ့မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်အဝတ်အစားနှင့်ရေကိုအလွယ်တကူမသုတ်နိုင်သည့်အပြင်ရေရှည်တည်တံ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်ညဘက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Retin-A ကိစ္စတွင် Dr. Evans ကအရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသက်သာစေရန်အတွက်ဆေးသောက်ရန်အချိန်ဇယားကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ Retin-A သည်အရေပြားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာသည်းခံနိုင်သည့်အတွက်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအကြိမ်ရေတိုးများလာသည်နှင့်အမျှကုသမှုအစတွင်အသုံးနည်းနိုင်သည်။ သူမလည်း Retin-A မှအရေပြားယားယံမှုကိုခံစားနေရသောလူနာများသည်ဆေးဝါးများသောက်သုံးခြင်းကို retinol ဟုခေါ်သည်။ သို့သော်ရလဒ်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
Dr. Uddoh ကတစ်ခါတစ်ရံလူနာများအနေဖြင့်အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း (သို့) အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သောဆေးများပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာ ၀ န်များနှင့်ပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ လူတိုင်း၊ အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုဆေးဝါးများအတွက်သက်ကြီးရွယ်အိုများအားကျွန်ုပ်၏အကြံပြုချက်သည်သင်၏ဆေးဝါးများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ ခက်ခဲသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သင်၏ဆရာဝန်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အခြားနည်းလမ်းများစတင်ရန်နှစ်စဉ်ဆေးဝါးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်တိုင်ပင်ရန်ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး Thermometers ၉ လုံး၊ နှိုင်းယှဉ်၊ ဝယ်ပါ၊ သိမ်းဆည်းပါ
ခြေချောင်းမှိုမှ 16 အိမ်မှာကုစား
အာမခံမပါဘဲအလွတ်ပုံစံ ၁၄ ရက်ကုန်ကျစရိတ်
ibuprofen ၄၀၀ မီလီဂရမ်သောက်ဖို့အဆင်ပြေလား